PinePhone, iyo foni inokwanisa kumhanya desktop desktop | Linux Vakapindwa muropa
Nhare mbozha dzatinoda zvakanyanya dzinonyanya kuzviitira software yavo. Chikamu chemhosva chiri pamashandisirwo anoita kuti zvinhu zvive nyore kwatiri, pakati pazvo tine akanakisa Twitter, Instagram kana Facebook vatengi kana mitambo yakagadzirirwa kushandiswa neminwe uye sensors yeiyo terminal. Dzimwe nhare, senge pinephone yePine64, ivo havana App Store (iOS) kana Google Play (Android), asi ivo vane dzimwe sarudzo dziripo, zvirinani?
In the Martijn Braam's YouTube chiteshi Vhidhiyo inonakidza yakaburitswa, iyo yauinayo pazasi pemitsara iyi. Mariri tinogona kuona PinePhone, iyo inoshandisa Plasma-based operating system iyo yavanoti postmarketOS, inomhanya desktop desktop. Chaizvoizvo, chatinoona iri foni matinogona kushandisa zvirongwa zvatinoshandisa pamakomputa, senge inozivikanwa yemufananidzo mupepeti GIMP. Ehe, izvozvi hazviiti zvakakwana.
PinePhone inomhanya desktop desktop
Pakati pemashandisirwo edesktop ayo PinePhone anomhanya isu tine Firefox, iyo yambotaurwa GIMP, akati wandei maLibreOffice kana maQuaternion maapplication. Asi pane dambudziko riri pachena: kunyangwe ese mabasa eapp anowanikwa, maapplication haana kuchinjirwa kune madiki madiki ma skrini, saka zvinonetsa kufamba nemamenyu uye kuita mamwe (zvirinani ese) mabasa
Iyo PinePhone inogona kubhuka kubvira munaNovember apfuura 15. Izvo iwe zvaunogona kukumbira izvozvi ndizvo Shanduro yeBraveHeart, iyo Pine64 pachayo inoti inofanirwa kunge iri yevanogadzira uye "Ekutanga Adopter". Muchokwadi, iyo kambani inoti izvo zvinosvika hazvina kana iyo sisitimu yekushandisa yakaiswa, muchidimbu nekuti zvese zvichiri padanho rekutanga. Pamwe, mumwedzi mishoma, ivo vanozoita chimwe chinhu kuita kuti iwo desktop desktop aonekwe zvirinani paPinePhone, pakati payo inogona kunge ichikwanisa kumhanyisa kunyorera mumamiriro emamiriro ekunze.
Izvi zvinonakidza izvo zvinogona kuitwa nePinePhone?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » PinePhone, iyo Plasma foni inokwanisa kumhanya desktop desktop
Kubudirira kwaro kunotsamira kwete kwete pakuita kwayo chete, asi kune vateereri vavanogona kusvika uye zviripachena pamutengo, sezvo mapurojekiti akafanana achikwira kumusoro uye voita kuti kutora kwavo kusakwanise.
Zorin OS 15 Lite inouya nerutsigiro rweSnap uye Flatpak mushure mekuiswa zero, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva
Iyo GNOME kalendari app. Kutanga 2020 zvakarongeka